စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် သာသနာပြုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် သာသနာ ပြုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေး ဆွေးနွေးပွဲကို PMS National office မှကြီးမှူး၍ ဇူလိုင်လ ၂၃ရက်နေ့ ယနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများကျောင်းတိုက် (CBCM ) ၌စတင်ကျင်းပ ခဲ့သည်။
ဖွင့်ပွဲ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် Bp.John Saw Yaw Han မှ ဦးဆောင်ပူဇော်ပေးခဲ့ သည်။
မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ပြီးနောက် ဆရာတော်မှ '' What the commemoration of the 100 anniversary of the Apostolic letter MAXIMUM ILLUD means to the Church in Myanmar '' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပို့ချပေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ Fr. Abraham Thein Lwin မှ '' Personal Encounter with Jesus '' ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Fr. B. Ne Ne မှ '' The main challenges and urgent needs of Myanmar Catholic Mission '' ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်းပို့ချဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ညနေပိုင်းတွင် သာသ နာပြန့်ပွားရေးစိပ်ပုတီးကို အတူတကွ စိပ်ခဲ့ ကြသည်။
ထို့နောက် PMS National Director နှင့် PMS Diocesan Directors များသီးသန့်အစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ကာ သာသနာ ပြုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးဆွေးနွေးပွဲကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ တတိယနေ့တွင် အဖ ကာဒီနယ် အဖကာဒီနယ်လ် ချားလ်စ်ဘိုမှ တက်ရောက် အားပေးကာ မစ္ဆားတရား တော်မြတ် ဦးဆောင် ပူဇော်ပေးခဲ့သည်။ မစ္ဆားတရားပြီးနောက် Dr. Edmund Chia နှင့် Dr. Gemma Cruz တို့မှ The Bible on the Mission of the Church, Jesus Christ: Foundation of the Church's Mission, Laity and Women in the Mission of the Church ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဆက်လက် ပို့ချဆွေးနွေးပေးခဲ့သည်။ ထို့ နောက်တွင် Best practice of Missionary Childhood ကို ကလေးဂိုဏ်းအုပ်သာသနာ၊ ဟားခါးဂိုဏ်အုပ်သာသနာ၊ တောင်ငူဂိုဏ်း အုပ်သာသနာနှင့် လွိုင်ကော်ဂိုဏ်းအုပ်သာ သနာတို့မှ တင်ပြပေးခဲ့သည်။
Pyone Pyone Aung
၁၅-ရကျ၊ ဩဂုတျလ၊ ၂၀၂၀
ပါနမာ(Panama)နိုငျငံတှငျ ကကျသလဈအသငျးတျောသညျ နိုငျငံအစိုးရနှငျ့ပူးပေါငျးကာ
Covid ရောဂါကို အတူတကှ ကာကှယျတိုကျဖကျြရေးဆောငျရှကျနခွေငျး
H. E. Cardinal Charles Bo
15 – August 2020
ကွီးလေးသော တာဝနျရှိလာကွောငျး လကျဘနှနျနိုငျငံသား ကာဒီနယျက ပွောကွားခွငျး
ကိုဗဈကပျရောဂါအတှကျ ရှတေ့နျးမှပါဝငျသော ကကျသလဈသီလရှငျမြားအား အမရေိကနျနှငျ့ဗွိတိနျသံအမတျမြားမှ ဂုဏျပွုလှာကို
ဝမျးနညျးထိတျလနျ့ဖှယျ ဘရှေတျ (Beirut)
မနီလာမှ ဆရာ​တျောပါးဘီလို ပွနျလညျကနျြးမာလာခွငျး
ကကျသလဈသတငျးဌါန(RVA) အား အစပွုဖှငျ့လှဈနိုငျခွငျး
18th Sunday of the Year -2nd August 2020
Sermon preached by Cardinal Charles Maung Bo., Archbishop of Yangon, Myanmar
ပွငျသဈမှ နှဈ ၈၀၀-သကျတမျးရှိ နောကျထပျ (နျောထရာ-ဒမျး Notre-Dame Amiens ) ကာသီဒွယျဘုရားကြောငျးတျောကွီး၏စိတျဝငျစားဖှယျရာမြား
Dr. Paolo Ruffini ၏သတငျးစကား
Louisiana ပွညျနယျ၏ ကကျသလဈဘာသာဝငျ အုပျခြုပျရေးမှူးမှ
ကိုရိုနာကပျကွီးအတှကျ အစာရှောငျဆုတောငျးကွရနျဖိတျချေါလိုကျခွငျး ******************************************************
ပီရူးနိုငျငံရှိ ကကျသလဈသီလရှငျကြောငျးကို ကိုဗဈလူနာမြားအတှကျ စောငျ့ကွညျ့လူနာဆောငျအဖွဈအခမဲ့အသုံးပွုစခွေငျး
New York တှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ သဆေုံးသှားသညျ့ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသူတို့၏ အရိုးပွာမြားကို ကောငျးခြီးပေးပွီး နရေငျးတိုငျးပွညျပွနျပို့ဆောငျပေးခွငျး ****************************************************
Wheat and Weeds : Good and Evil Sowers
Martyrs Day in Myanmar
Sermon preached by Cardinal Charles Maung Bo.
ကကျသလဈသတငျးသမားမြားသညျစညျးလုံးရေးကိုတညျဆောကျနိုငျရမညျ ဖွဈကွောငျး ဗာတီကနျဆကျသှယျရေးအကွီးအကဲမှတိုကျတှနျးပွောကွားခွငျး
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့မှဂိုဏျးခြုပျဆရာတျောကွီး Moses ပြံလှနျတျောမူသှားပွီ
His Grace, Archbishop Moses Costa, CSC
Return to his Father's house
A message addressed to civilian, ethnic, military and religious leaders of Myanmar
Sermon Preached by Cardinal Charles Maung Bo., SDB, Archbishop of Yangon
15th Sunday of the Year, July 12,2020